Prof. U Ko Ko – စာမကျြနှာ 21 – Healthy Life Journal
ပလတ်စတစ် အသုံးအဆောင်ထဲ အစာပူပူ ထည့်ပြီးစားလျှင် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိ
အထွေထွေ ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကို ပလတ်စတစ် အသုံးအဆောင်များထဲ အစားအသောက် စားသုံးလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် ပလတ်စတစ်က ထွက်သည့် BPA ခေါ် ဓာတုဓာတ်များ ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ၀င်သွားပါက အမျိုးသားများတွင် တက်စတိုစရုန်း၊ အမျိုးသမီးများတွင် အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်း ကျဆင်းသည့် ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိကြောင်း...
မင်္ဂလာဆောင်မည့်သူတို့အတွက် ကျန်းမာရေး အကြံပြုချက်များ
ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် သတို့သား၊ သတို့သမီးလောင်းတွေက ဘယ်လို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. အိမ်ထောင်ပြုမယ့် သူတွေက ကူးစက်ရောဂါတွေ ရှိသလား၊ မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ရှိသလားဆိုတာတွေ သိအောင်...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်သည့် အချက်များ
ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည်။ မေး. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးပါ ဆရာ။ ဖြေ. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက်သုံးချက်က ဒီရောဂါဟာ- (၁) ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ဖြစ်တယ်၊...
ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များကို အန္တရာယ်ကင်းဝေးအောင် စားသောက်နည်း
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အခုခေတ်မှာ လူတန်းစေ့နေနိုင်စေဖို့ အိမ်ရှိ အရွယ်ရောက် မိသားစုဝင်အားလုံးလိုလို အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေ အဆင်သင့်ရတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်လို အစာတွေကို စားဖြစ်နေတာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားနိုင်စေဖို့ ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးကိုကိုနဲ့ မေးမြန်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူ သွေးတိုးလျှင်၊ သွေးပေါင်ကျလျှင် . . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည်။ မေး။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်များပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုရင် ၃၀ – ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ရင် သွေးတိုးရောဂါကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး . ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်နဲ့အိပ်ရင် ဘယ်လိုရောဂါတွေ ကာကွယ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ၊ ခြင်ဆေးခွေသုံးတာနဲ့ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်သုံးတာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းပါသလဲ၊ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်သုံးတဲ့နည်းလမ်းကို သိပါရစေဆရာ။ ကိုသန်းထူး၊ ပဲခူး။ ဖြေ . ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်သုံးတာကြောင့် ငှက်ဖျားရောဂါ၊သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအစရှိတဲ့...
ဆီးချိုရောဂါရှိရင် မိသားစုဝင်တွေစားသလို စားနိုင်သလား
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး။ . ကျွန်မအမေဆီးချိုရောဂါရှိနေတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမှသိရပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မတို့ က အမေ့အတွက်စိတ်ပူလို့ အစာကို အချိုမပါတာ သက်သက်စီမံပေးတယ်။ အမေက ကျွန်မတို့စားသလိုပဲစားချင်နေတယ်။ အမေကကျွန်မတို့ မိသားစုဝင်တွေစားတဲ့အစာကို စားနိုင်ပါသလား ဆရာ။ လွင်မာဦး၊ ရွှေပေါက်ကံ။...